नाकाबन्दी नेपालीले सजिलै बिर्सने विषय होइन
१९ कार्तिक - मुखर्जीको भ्रमण ‘सरोमोनियल’हो। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरु विषयवस्तु र सम्झौताको हिसाबले अलि बढी प्रभावकारी हुन्छन्। तर सेरोमोनियल भ्रमण नै भए पनि त्यसको पछाडि सार हुँदैन भन्ने चाँही होइन। यो पनि कुटनीतिकको खेल नै हो।
१८ कार्तिक - भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अफ्ठेरो पार्ने भएकाले नेपाल सरकारले मुखर्जीको पोखरा–यात्रा रोक्न सक्नुपथ्र्यो। पाकिस्तान, चीन, बेलायत वा अन्य मुलुकसँग पनि नेपालको सम्बन्ध भएका कारण सैनिक क्याम्पमा गएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नराखौँ भनेर नेपालका...
भारतसँग अझै अङ्ग्रेज–मानसिकता छ
१८ कार्तिक - भारत स्वतन्त्र हुँदाको बखतमा हैदरावाद, काश्मिर पनि स्वतन्त्र देश थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले काश्मिर र हैदरावादलाई जस्तै नेपाललाई पनि विशाल भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने पत्र नेहरूलाई लेखेका थिए। भारतीय नेताहरूमा नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने बुझाइ थिएन र, अझै पनि छैन भन्ने तथ्यहरूले...
मुखर्जीको भ्रमणले तय गर्ला यस्तो मार्गचित्र?
१७ कार्तिक - झण्डै दुई दशकको अवधिमा पहिलो पटक भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्दा उनले पछिल्लो समय तनावमा आएको सम्बन्धलाई सहज बनाउन प्रयास गर्नेछन्। तनावलाई पछाडि छोड्नु मुखर्जीको कुटनीतिक अभिभाराको एक भाग मात्रै हो। उनको अर्को जिम्मेवारी भविष्यलाई नियाल्ने र नेपाल–भारतबीचको अद्वितीय...
माने पनि नमाने पनि नेपालमा कम्युनिस्टको प्रभाव छ
१३ कार्तिक - नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी भएको हुनाले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी पनि यसैको हो। संविधानको निर्माण नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। अब संविधानको कार्यान्वयनमा पनि सबैलाई साथ लिएर कांग्रेसले देशलाई गति दिन चाहन्छ। मधेसी दलहरूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन्।...
१२ कार्तिक - चीनले लिएको पहललाई स्वागत गर्नु र त्यसमाथि थप विकास गर्नु हाम्रो इच्छाको विषय मात्र नभई सम्पूर्ण एशियाली राष्ट्रहरुको निम्ति एउटा बाध्यता समेत हो। साझा समृद्धिको साझा लक्ष्यद्वारा नै एशियाले विश्वको अगुवाई गर्न सक्नेछ।
१० कार्तिक - सिनेमा र संस्कृतिबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ। सिनेमा आफै एक सांस्कृतिक उत्पादन भएकाले संस्कृतिसँग अलग गरेर यसको विश्लेषण– मूल्याङ्कन सम्भव छैन। संस्कृतिसँग गहिरोसँग जोडिएको कला रूप भएका कारण सिनेमा र संस्कृतिबीच सम्बन्धका विविध पक्ष छन्। सिनेमा र संस्कृति दुवैले एक–अर्कालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्दै...
बरु गणतन्त्रलाई राष्ट्रिय चाड मानौं
७ कार्तिक - दशैँलाई राष्ट्रिय चाडको रुपमा निरन्तरता दिने कार्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दशैँमा भएका गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा त्यस्तो हुनु स्वभाविक होइन। दशैँ होइन गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउने परम्परा थालनी हुनुपर्छ। सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरुले...
आवाजसँगै यो कस्तो डरलाग्दो मौनता
६ कार्तिक - दशैँको बेला मुस्ताङको कागबेनीमा सँगै पुगेको हल्यान्डको योहानिशले सोध्यो, ‘हामी हिजो आएको, बाटो राम्रो बनाउने बारे यो देशका राजनेताहरु एउटा टेबलमा बसेर साँच्चिकै गम्भीर भएर सोच्लान् त?’ यो देशका बस ड्राइभरहरु मुत्युको लालपुर्जा हातमा बोकेर हिँड्छन्। कुन बेला भीरले औंठाछाप लाइदिने हो थाहा छैन। उ...
पहिले अघि बढ्न त्रास थियो, अब पछि हट्न
५ कार्तिक - कार्कीले पछिल्लो समयमा अदालतलाई समेत अवहेलना गरेको घटनाबाट जनस्तरमा ठूलो आक्रोश उत्पन्न भएको छ। दलहरु पछि हट्न खोजे भने आक्रोशको तारो उनीहरु बन्नेछन्। अब त ढिलाइ गर्दा पनि दलहरुलाई हानी हुने देखिन्छ। जुन दल पछि हट्छ, त्यसको शिकार उही हुन्छ। चुनावको मुखमा लोकमानलाई बचाउ गर्ने हिम्मत कसैले गर्न...
कानुनभन्दा माथि कोही छैन, हामी सांसद टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?
२ कार्तिक - आज विशेष समय लिएर बिशेष कुरा यस सदनमा उठाउनु पर्दा मलाई सन्तोष होइन, ग्लानीको अनुभव भइरहेको छ । बिस्तार बिस्तारै राज्य असफल हुने संभावनातिर गइरहेको महसुस हुँदैछ। लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भन्ने काखी बजाउनेहरुको हर्षको सिमा छैन। जति कानुन मिच्यो त्यति मिच्नेको समाजमा प्रतिष्ठा बढ्दैछ।
अहिलेको दशैँ बजारबाट आउँछ
२४ असोज - दशैं धेरै पुरानो चाँड हो। दशैंमा देवीको पूजा हुनुले आदिम मातृतन्त्री समाजबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ। त्यो भनेको कम्तिमा पनि ६ हजार वर्ष पुरानो हो। त्यो बेला मानिसहरु शिकारी युगमै थिए। शिकारी युगबाट अलिअलि आवासमा रहन थालेका थिए।
सेतो टीका निधारमा
२३ असोज - दशैँले व्यापकता पाएकै कारण मधेसीहरु मधेस गएका छन्, हिमाली समुदायकाहरु पनि शुभकामना आदानप्रदान गर्दैछन्। दशैँ अब नेपालीकरण भएको छ। दशैँ बहिष्करण अभियान कमजोर हुँदैछ र, यो अहिले सबै नेपालीलाई जोड्ने चाड बन्दैछ।
हिमाली र मधेशीलाई किन महान भएन दशैँ?
२२ असोज - दशैँलाई नेपालीको महान् चाड भनिन्छ। तर जनसंख्या र अन्य हिसाबले पनि दशैं अधिकांश नेपालीको महान् चाड होइन। हिमालका शेर्पा वा तराई–मधेशका मधेशीका निम्ति यो महान् चाड बन्न सकेको छैन। मध्य पहाडी जनजातिले पनि दशैँलाई पुनःपरिभाषित गर्ने यत्न गरिरहेकै छन्।
के हो हङकङका नेपाली युवाको समस्याको जरो?
२० असोज - अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुनै मन्त्री हङकङमा छैन। माछा मार्नेदेखि लिएर ट्याक्सी ड्राइभर र कपडा व्यापारीका प्रतिनिधि पनि हाम्रो संसदमा छन्। तर खोई त अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि? मलाई लाग्छ, यसरी सोध्नु धेरै ठूलो कुरा हो।
१९ असोज - यो वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस स्थापनाको सत्तरी वर्ष पूरा हुँदैछ। गान्धीवादी आदर्शबाट प्रेरित भई ००३ सालमा स्थापना भएको उक्त पार्टी नेपाली राजनीतिक सात दशकका सबै उतारचढावहरुको मूल शक्ति र साक्षी हो । तर सङ्गठन, सिद्धान्त र व्यवहारका कसीले काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा कहिले सबलताको उज्यालो छरियो त कहिले...
त्यसैले उठ्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको औचित्यमा प्रश्न
१५ असोज - कुनै पनि एनजिओसँग भूकम्पले असर पारेका जिल्ला तथा गाउँमा पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हैसियत छैन। उनीहरुसँग ज्ञान, सीप र क्षमता छैन। पर्याप्त नेटवर्क र संगठन पनि छैन। एनजिओ-आइएनजिओहरुले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन्।
नयाँ शक्तिको औचित्य र वैकल्पिक विचार
१५ असोज - विश्व राजनीतिमा रहेका दुई धुरी पुँजीवाद र समाजवाद आज न हासको चाल न बकुल्लाको चालमा रहँदै आफ्नो अन्त्य पर्खिरहेका छन्। पुँजीवादको विकसित रूप उदारवाद र नवउदारवाद जसले विश्वका आधा जनसंख्यासँग भए बराबरको सम्पत्ति केवल विश्वका ६२ जना धनी मानिसको हातमा केन्द्रित गर्‍यो जसले न्याय, शान्ति र समानता दिने...
प्रचण्ड अब आदर्शवादी नेता रहेनन्
१४ असोज - चीन नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन तर नेपालसहितका छिमेकी देशहरुले चीनको विकासबाट फाइदा लिन सकुन् भन्ने आशा गर्दछ। तीन ओटै अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्ने र समृद्ध तुल्याउने चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरलाई अघि बढाउन बेइजिङ यो पनि आशा गर्दछ कि काठमाडौँ चीन र भारतबीचको पुल...
ऐना पछिल्तिर मन्त्री कार्कीको अर्को अनुहार
९ असोज - माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की बौद्धिक तथा अध्ययनशील वामपन्थी कर्मठको रुपमा परिचित छन्। तिनै कार्की अहिले सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सञ्चारमन्त्री भएपछि थाहा भयो– उनी जे भन्छन्, त्यो नगर्दा रहेछन् र जे देखिन्छन्, त्यो होइन...